Vaovao - Niakatra mihoatra ny fanantenana ny fitomboan'ny vidin'ny kobalt ary mety hiverina amin'ny sehatra misy fijery
Niakatra mihoatra ny fanantenana ny fitomboan'ny vidin'ny kobalt ary mety hiverina amin'ny sehatra misy ny lozabe
Tamin'ny ampahefatry ny faharoa tamin'ny taona 2020, ny totalin'ny fanafody akora kobalt dia nahatratra 16800 taonina vy, fihenan'ny taona isan-taona amin'ny 19%. Amin'izany, ny totalin'ny kobalt ore kobalt dia 0.01 tapitrisa taonina vy, fihenan'ny 92% isan-taona; ny totalin'ny fanafody mpanelanelana feno kobalt lena dia 15800 taonina, fihenan'ny 15% isan-taona; ny totalin'ny fanafarana kobalt tsy hita dia 0,08 tapitrisa taonina vy, fitomboana 57% isan-taona.
Fiovan'ny vidin'ny vokatra kobalt SMM manomboka amin'ny 8 may ka hatramin'ny 31 jolay 2020
Data avy amin'ny SMM
Taorian'ny tapaky ny volana jona, ny tahan'ny fitambaran'ny kôloly elektrika amin'ny kobalt sulfate dia nitombo tsikelikely nahatratra 1, indrindra noho ny fanarenana tsikelikely ny fangatahan'ny fitaovana bateria.
SMM kobalt mampitaha ny vidin'ny vokatra avy amin'ny 8 may hatramin'ny 31 jolay 2020
Ny antony tokana nanohana ny fisondrotan'ny vidiny nanomboka ny Mey ka hatrany jona tamin'ity taona ity dia ny fanakatonana ny seranan-tsambo any Afrika Atsimo tamin'ny volana avrily, ary ny lamina vita amin'ny kobalt an-trano dia nikatona hatramin'ny Mey sy jona. Na izany aza, ny fototry ny vokatra voaroy ao amin'ny tsena an-trano dia mbola tafahoatra ihany, ary ny kobalt sulfate dia nanomboka nidina tamin'io volana io, ary nihatsara ny fototra. Tsy dia nihatsara ny fangatahana midina, ary niditra ny vanim-potoana hividianana ny fangatahana elektronika nomerika 3C, ary kely ny fitomboan'ny vidiny.
Hatramin'ny tapaky ny volana Jolay tamin'ity taona ity dia nitombo ny antony manohana ny vidin'ny:
1. Tapitra ny famatsiana akora kobalt:
Ny lozam-pifanatrohan'ilay satroboninahitra vaovao any Afrika dia henjana, ary nisy tranga niseho tao amin'ny faritra fitrandrahana. Tsy tratra vokatr'izany ny famokarana. Na dia hentitra aza ny fisorohana sy ny fifehezana ny valan'aretina amin'ny faritra mpitrandraka ary kely ny ahiahy amin'ny fihanaky ny fihanaky miely be.
Amin'izao fotoana izao, ny fahafahan'ny seranan'i Afrika Atsimo dia misy fiantraikany lehibe indrindra. Amin'izao fotoana izao i Afrika Atsimo no firenena tena voakasik'izany indrindra. Nihoatra ny 480.000 ny isan'ny tranga voamarina, ary nitombo ny isan'ny diagnostika vaovao 10.000 isan'andro. Tsiahivina fa hatramin'ny nialan'i Afrika Atsimo ny fanelingelanana tamin'ny 1 May, ny fahavitan'ny seranan-tsambo dia nandeha miadana, ary ny fandaharam-potoana voalohany dia nandefa tamin'ny tapaky ny volana Mey; ny fahaizan'ny seranan-tsambo nanomboka tamin'ny volana jona ka hatramin'ny Jolay dia 50-60% fotsiny ny fahaizan'ny normal; araka ny valin-kafatra avy amin'ny mpamatsy akora kobalt, Noho ny fantsom-pitaterana manokana, ny fandaharam-pitaterana ireo mpamatsy fahita mahazatra dia mitovy amin'ny vanim-potoana teo aloha, saingy tsy misy marika fanatsarana. Antenaina fa hitohy ny toe-javatra farafaharatsiny ao anatin'ny roa na telo volana ho avy; ny fandefasana ny fandefasana fandefasana ny volana Aogositra farany teo dia miharatsy, ary ny entana hafa sy ny kobalt fitaovana vita amin'ny Raw dia maka ny fetran'ny serivisy afrikana tatsimo.
Tamin'ny ampahefatry ny faharoa tamin'ny taona 2020, ny totalin'ny fanafody akora kobalt dia nahatratra 16800 taonina vy, fihenan'ny taona isan-taona amin'ny 19%. Amin'izany, ny totalin'ny kobalt ore kobalt dia 0.01 tapitrisa taonina vy, fihenan'ny 92% isan-taona; ny totalin'ny fanafody mpanelanelana feno kobalt lena dia 15800 taonina, fihenan'ny 15% isan-taona; ny fitaterana kobalt tsy voavaly dia 0,08 tapitrisa taonina vy. Fitomboana 57% isan-taona.
Ny fanafarana akora kobalt any Shina nanomboka tamin'ny Janoary 2019 ka hatramin'ny Aogositra 2020
Data avy amin'ny SMM & Shinoa Custom
Ny governemanta sy ny indostria afrikanina dia hanitsy ny fitrandran'ireo mpifanandrina aminy. Araka ny vaovao an-tsena, nanomboka ny volana aogositra tamin'ity taona ity, dia hifehezana tanteraka sy hifehezana ny masom-bolo. Ny vanim-potoana fanitsiana dia mety hisy fiantraikany amin'ny fanafarana ny akora kobalt sasany amin'ny fotoana fohy, mitarika amin'ny famatsiana henjana. Saingy, ny famatsiana ny orana isan-taona amin'ny alàlan'ny antontan'isa tsy feno, dia mitentina 6% -10% amin'ny fitaterana ny akora vita amin'ny kobalt maneran-tany, izay tsy dia misy fiantraikany.
Noho izany, ny fitaovana vita amin'ny kobalt an-trano dia mbola manakaiki-pitandremana ary hitohy mandritra ny 2-3 volana fara-fahakeliny. Araka ny fanaraha-maso sy ny eritreritra, ny famoronana akora kobalt an-trano dia manodidina ny 9000-11,000 taonina taonina, ary ny fanjifàna an-tsokosoko an-trano dia manodidina ny 1-1,5 volana, ary ny akora ara-dalàna kobalt mahazatra dia mitazona ny famoronana 2-martsa. Ny areti-mifindra koa dia nampitombo ny vidin'ny orinasa mpitrandraka harena ankibon'ny tany, nahatonga ny mpamatsy akora kobalt tsy sahy nivarotra, ary vitsy ny baiko ary miakatra ny vidiny.
2. lafiny famatsiana vokatra:
Ny maka ny kôpta kôpta ho ohatra, ny kôkômbia kôkta dia tonga amin'ny fifandanjana eo anelanelan'ny famatsiana sy ny tinady tamin'ny volana Jolay, ary ny famoronana kobalt sulfate ambany amin'ny tsena dia nanohana ny fanitsiana miakatra ny kobalt sulfate mpamatsy.
Manomboka amin'ny Jolay 2018 ka hatramin'ny Jolay 2020 E, Balance Cumulative Sulkate Sulinee China
3. lafiny fitakiana
Ny terminal nomerika 3C dia niditra ny tampon'ilay fahazoana entana sy ny tahiry tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taona. Ho an'ny zavamaniry sira kobalt ary mpanamboatra kobalt tetroxide, mitohy ny fananganana. Na izany aza, takatra fa ny fikajiana ny akora manta kobalt ao amin'ny trano fitaterana bateria lehibe indrindra dia farafahakeliny 1500-2000 taonina farafaharatsiny, ary mbola misy ny kobalt akora miloko miditra ao amin'ny seranana mifandimby isam-bolana. Ny fitaovan'ny akora vita amin'ny lithium cobalt oxide sy ny orinasa mpamokatra bateria dia avo noho ny an'ny sira masira sy ny cobalt tetroxide. Mazava ho azy fa tsara ihany ny fahatsapan-tena momba ny fahatongavan'ny akora kobalt manaraka any Hong Kong.
Ny fangatahana ternary dia manomboka miakatra, ary ny fanantenana dia mihatsara amin'ny tapany faharoa amin'ny taona. Raha jerena fa ny fividianana fitaovana ternary amin'ny alàlan'ny famatsiana herinaratra herinaratra dia maharitra ela, ny zavamaniry bateria sy ny zavamaniry ternary amin'izao fotoana izao dia mbola an-tsokosoko, ary mbola tsy misy fisondrotana lehibe amin'ny fangatahana mividy ny fitaovana maba volo. Ny baiko midina dia miverina tsimoramora ihany, ary mihena ny tahan'ny fitakiana noho ny fiakaran'ny vidin-tsolika ambony, noho izany dia mbola sarotra ny mamindra.
4. Ny fidiram-bolan'ny Macro renivohitra, ny fividianana ary ny fitehirizana
Tato ho ato, ny fanabeazana macroekonomika ao an-trano dia nitohy nihatsara, ary nitombo ny fidiram-bolan'ny renivohitra izay nitombo be ny fangatahan'ny tsenan'ny kôloly electrolytic. Na izany aza, ny fanjifana farany amin'ny alàlan'ny hafanana hafanana, ny vokatra magnetika, ny simika ary ny indostria hafa dia tsy mampiseho famantarana ny fanatsarana. Ankoatr'izay, ny tsaho momba ny tsena fa ny fividianana sy ny fitahirizana ny kobika elektrolika dia nanamafy ny fiakaran'ny vidin'ny kobalt amin'ity boriborintany ity, saingy mbola tsy niitatra ny vaovao momba ny fividianana sy fitahirizana, izay antenaina hisy fiantraikany kely amin'ny tsena.
Raha fintinina, noho ny fiantraikan'ilay valan'aretina satroboninahitra vaovao tamin'ny 2020, dia ho malemy ny famatsiana sy ny fangatahana. Ny fototry ny oversupply kobalt manerantany dia tsy miova, fa ny toe-javatra famatsiana sy ny fangatahana dia mety hihatsara. Ny famatsiana eran-tany sy ny fangatahana ny kobalt raw mentes dia tokony handanjana vy 17000 taonina.
Ny lafiny famatsiana dia nohidiana ny fitrandrahana varahina Mutanda Glencore. Ny tetik'asa vaovao kobalt vaovao sasany nomanina ho amboarina amin'ity taona ity dia mety hahemotra amin'ny taona manaraka. Ny famatsiana takelaka tànana dia mihena ao anatin'ny fotoana fohy. Noho izany, ny SMM dia manohy mihena ny vinavina famatsiana akany kobalt amin'ity taona ity. Ny metaly 155.000 taonina, ny fihenan'ny taona 6%. Amin'ny lafiny fitakiana, nampidinin'ny SMM ny famokarana ho an'ny fiara, angovo sy fitahirizana angovo, ary ny fangatahana kobalt eran-tany dia nahena ho 138000 taonina vy.
2018-2020 famatsiana kobalt manerantany sy fifandanjana fitakiana
Na dia nitombo aza ny fangatahana 5G, birao an-tserasera, vokatra elektronika azo ampiasaina sns sns, dia nitombo ny fangatahana lithium cobalt oxide sy ny fitaovana aramiana ambony, saingy ny famokarana sy ny famarotana ireo faran'ny finday miaraka amin'ny tsena avo indrindra voan'ny areti-mifindra dia antenaina fa hitohy mihena, manelingelina ampahany amin'ny fiantraikan'ny lithium cobalt oxide sy ny fiakaran'ny rano Mampitombo ny fangatahana fitaovana kobalt. Noho izany, tsy voafaritra fa hampiakatra be ny vidin'ny akora maimaim-poana, izay mety hiteraka fihenan'ny drafi-pamokarana midina. Noho izany, avy amin'ny fomba fijerin'ny famatsiana kobalt sy fangatahana, ny fisondrotry ny kobalt amin'ny tapany faharoa amin'ny taona dia voafetra, ary ny vidin'ny kobika electrolytic dia mety mihena eo anelanelan'ny 23-32 tapitrisa yuan / ton.